Amajikijolo e-pancreatitis: iziphi ezingenzeka futhi ezingekho? > Ukudla ngesifo sikashukela
Kungenzeka yini ukuthi udle ama-sitrobheli nge-pancreatic pancreatitis?
Ekulimazeni okungapheli kwama-pancreas, abantu baphoqelelwa ukuthi badle ekudleni okukhethekile, okukhawulelwe ohlwini oluthile lokudla okungavunyelwe. Ingabe amajikijolo e-pancreatitis afakiwe kulolu hlu?
Njengoba kunikezwe imininingwane yalesi sifo nayo yonke imikhawulo ekudleni, ekusebenziseni amajikijolo udinga ukulandela izincomo zochwepheshe be-gastroenterologists nabezempilo ezazi kahle ukuthi imiphi amajikijolo angakwazi ukunikezwa iziguli ezinalokhu okungenziwa.
Imiphi amajikijolo angasetshenziswa i-pancreatitis?
Kwi-pancreatitis ebaluleke kakhulu, lokhu kudla kuyinto encane kakhulu ukuthi kungabikho ngisho noma iyiphi amajikijolo. Ngakho-ke, izazi zezempilo zibheka ukuzifaka ekudleni kuphela ngendlela engapheli yalesi sifo - ngokuya ekunciphiseni noma ekuqiniseni kwezimpawu.
Ngenxa yokuvuvukala kwama-pancreas kanye nomonakalo kumaseli awo we-exocrine ne-endocrine akhiqiza ama-enzyme nama-hormone, imisebenzi yesitho ayonakalisiwe, okuholela ekungenisweni kwezakhi zomzimba. Futhi, umzimba ungantula amavithamini kanye namaminerali. Abaphenyi bathole ukuthi ukudla ukudla okuqukethe amavithamini A, C, E, B, i-iron ne-zinc kusiza ukuvikela i-pancreatitis. Funda - Ukudla ngokuhlaselwa kwe-pancreatitis.
Ngenxa yezizathu ezisobala, akuwona wonke amajikijolo nezithelo ezivunyelwe ezigulini ezine-pancreatitis engapheli. Kunikezwe izincomo ezinemininingwane mayelana nezithelo embhalweni - Izithelo ku pancreatitis oyingozi futhi ezingamahlalakhona.
Futhi sizoqala ngensimbi enkulu kakhulu, eyiqiniso, yamanga abantu abayisebenzisayo.
Kungenzeka yini ikhabe nge-pancreatitis?
Ku-pulp ye-watermelon, okuqukethwe kwe-fiber kuyinto ephansi (kuze kufike ku-0.5%), ngakho-ke kufakwa njengomkhiqizo wokudla. Ngokuya kokuqukethwe yensimbi ne-potassium, ikhabe alisebenzi ngemuva kwesipinashi. Kubalulekile futhi ukuthi iqukethe izinto ze-alkaline ezinegalelo ekubuyiselweni kwemali esele yomzimba. Ngakho-ke, i-watermelon ingaba ne-pancreatitis - uma kungekho exacerbation.
Kepha inkomba ye-glycemic ye-watermelon iphakeme kakhulu (i-GI 72), kepha yingenxa ye-fructose, edonswa ngaphandle kokubamba iqhaza kwe-insulin - okungukuthi, ayigcwalisi amaseli e-beta pancreas, okuthi ku-pancreatitis kungahle kungahambelani nokubekwa kwenani elidingekayo laleli hormone.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi, ngokwezibalo zomtholampilo, esigabeni esithile se-pancreatitis engapheli kuma-25-45% eziguli, amandla okuthola ushukela anciphisa ngokukhula okulandelayo kwesifo sikashukela mellitus.
Imvamisa ku-tandem nge-ikhabe kukhona ikhabe, ngoba ngumndeni wethanga ofanayo. Inoshukela ocishe ufane noshukela (i-GI 65), kepha i-fiber ethe xaxa. Futhi kumbuzo - kungenzeka ukuthi i-cantaloupe ene-pancreatitis - izazi zokudla okunempilo zinikeza impendulo efanayo: kuphela ngokuxolelwa okuqhubekayo kwesifo nangobuningi obulinganiselwe.
I-decoction of rose rose okhalweni inconyelwa cishe konke ukudla kwanoma yisiphi isifo. Phakathi kwezinto ezisetshenziswayo eziqukethwe yilawa majikijolo, amavithamini A, C no-E ahlukanisiwe, kanye nezakhi zomzimba zepypyphenolic (flavonoid). Kepha inombolo yokuqala ibhekwa njenge-ascorbic acid - uvithamini C, lapho izithelo ezi-100 g zintsha zifinyelela kuma-450-470 mg. Ngakho-ke i-dogrose ene-pancreatitis (cishe ama-400-500 ml we-decoction noma ukumamanzelwa kwamanzi ngosuku) isebenza njengosizo lwamavithamini omuhle.
Umzimba udinga i-Vitamin C yokwakheka kwamaprotheni kanye ne-lipid, ukwakheka kwe-collagen kanye nokuvuselelwa kwezicubu, ukukhiqizwa kwama-peptide amahomoni kanye ne-neurotransmitter norepinephrine, ye-tyrosine metabolism, njll. Isebenza njenge-antioxidant, inciphisa ukonakala kwe-oxidative kwama-phospholipids kanye nomonakalo wamaprotheni amaselula ngama-radicals wamahhala.
Kepha uma iziguli zinomlando we-thrombophlebitis, khona-ke kufanele ziqaphele okhalweni lwe-rose: ine-Vitamin K ekhulisa ukuqina kwegazi.
Ngaphezu kwalokho, i-rosehip inyusa ukukhiqizwa komchamo futhi ibe buthaka.
Okusajingijolo ngenxa pancreatitis
Kujikijolo obushelelezi we-raspberry empeleni kunenqwaba yefiber - cishe ama-30%, kanye ne-acidity ephezulu (pH 3.2-3.9), okuthi, nge-pancreas ekhanyisiwe, ngokushesha kuyithumele kuhlu lwemikhiqizo ephikisiwe. Kepha lokhu kusebenza kumajikijolo amasha, futhi ngesimo se-compote esenziwe kumajikijolo ancibilikile (okungukuthi ngaphandle kwamatshe), i-jelly, i-mousse noma i-jelly - ungayisebenzisa.
Ngendlela, iningi labadliwayo livumela ama-raspberries amasha we-pancreatitis (hhayi ngaphezulu kwe-100 g ngosuku amahlandla ambalwa ngeviki) - lapho isimo seziguli sizinza. Futhi konke ngoba ama-anthocyanins, i-kempferol ne-quercetin flavonoids, okuvela ku-hydroxybenzoic acid, i-ellagic, chlorogenic, coumaric ne-asidi ye-ferulic okunika izakhiwo ze-antioxidant nezokulwa nokuvuvukala kwale berry.
Muva nje, ukunakwa kwabacwaningi bekugxilwe ku-ellagic acid, okuku-raspberries kakhulu kunakwamanye amajikijolo. Futhi kwatholakala ukuthi le ndawo eyenziwe nge-polyphenolic iyakwazi ukunciphisa ukukhiqizwa nomsebenzi we-cycloo oxygenase-2, i-enzyme evimbela ukuvuvukala, okungukuthi, ukunciphisa ukuvuvukala. Ngaphezu kwalokho, njengoba kubikwa kuyi-World Journal of Gastroenterology, i-ellagic acid ivimbela ukukhula kwamaseli ayingozi kumdlavuza we-pancreatic.
Ama-Strawberry noma ama-sitrobheni we-pancreatitis esigabeni esifanayo nama-raspberries. Okusho ukuthi, ngenxa yokuba khona kwe-citric, i-malic ne-ascorbic acid (uvithamini C), yi-acidic (isilinganiso pH = 3.45), iqukethe i-fiber yokudla namathambo amancane angagaywanga esiswini futhi angasebenza kuvuvukale. Ngakho-ke, odokotela abancomi ngama-exacerbations ukuthi badle ama-sitrobheli (ama-sitrobheli) ngendlela yabo yemvelo.
Ngakolunye uhlangothi, lapho isimo sesiguli ekuxolelweni sithuthuka, udokotela ohambelayo angavumela imenyu ukuthi ilekelelwe nge-mousse, i-compote, i-jelly noma i-jelly kusuka kumajikijolo acubuziwe. Ungayipheka kanjani i-sitrobheli jelly, funda okushicilelwe - Ama-pancreatitis Ukudla Ungadliwa.
Futhi ngentuthuko yesikhathi eside - futhi kuphela lapho kungekho okhubazekile we-carbohydrate metabolism - ungadla amajikijolo amaningi amasha ngosuku ngesizini se-sitrobheli: aqukethe i-ellagic acid ne-vithamini B5.
Uhlobo luni lwamajikijolo ane-pancreatitis olungenakwenzeka?
I-fiber kanye nama-acid atholakala kumajikijolo amasha kwenza ama-pancreas akhiqize ama-enzyme wokugaya ngaphezulu. Kepha ngokuvuvukala okungapheli, ukuqaliswa kwalomsebenzi kukhawulelwe, okudala isidingo sokuhambisana Ukudla mayelana pancreatitis oyingozi futhi ezingamahlalakhona.
Ikhasi lamajikijolo liqukethe i-polysaccharide pectin, engagaywanga futhi engagwenywanga, kodwa isebenze ekusithekeni kwezindlala ezihilelekile ekugayweni - kufaka phakathi amanyikwe. Futhi yilesi sizathu esenza ukuba namajikijolo amasha anesikhumba esiminyene nge-pancreatitis ku-contraindication.
Ama-Gooseberry aphethwe yi-pancreatitis awangeni ekudleni nhlobo - ngisho noma amanyikwe athi "i-truce", futhi isimo seziguli sivumela amanye amajikijolo ukuba adliwe amasha. Ngesikhumba esiminyene kakhulu nembewu eningi (konke lokhu kungukufakelwa kanye ne-2,5% pectin), i-pH yalezi zithelo futhi isezingeni le-2.8-3.1. Cha, empeleni i-gooseberry iyi-berry ebaluleke kakhulu, ngoba icishe ibe ne-vitamin C eningi njengombala omnyama. Ama-Gooseberry aqukethe i-folic acid eningi (ilungele abesifazane abakhulelwe), futhi iyasiza ngokuqunjelwa. Kodwa maqondana ne-pancreatitis, umphumela we-choleretic wale amajikijolo kufanele ubhekwe.
Amajikijolo anemibala emnyama - obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka, i-violet - okuqukethwe okuphezulu kwama-antioxidants: ama-polyphenols nama-flavonoids-anthocyanins. Amajikijolo anezinga eliphakeme lalezi zinto ezisebenza ngokubandakanya i-blueberries, cherries, currants abamnyama nabomvu, cranberries, amagilebhisi nama-cherries amamaki amnyama.
Ngaphandle kwalokhu, ama-cranberry aphikiswa ku-pancreatitis: kuzo zonke izinto zawo ezizuzisayo - antimicrobial and anti-inflammatory - level acidity (pH 2.3-2.5) esondela kalamula (pH = 2-2.6), futhi ngenxa yokuphakama kwayo ama-organic acids, abangela ukukhuphuka kwe-bile okwenziwa ngayo, kusebenze ama-pancreas.
I-currant ebomvu nge-pancreatitis inqatshelwe ngenxa yezizathu ezifanayo: isikhumba esiminyene nokuqukethwe okunama-asidi amaningi (isilinganiso pH = 2.85). Ama-Sweeter cherries nge-pancreatitis angangezwa ku-compote, kepha izazi zezempilo zaziletha amajikijolo amasha emikhiqizweni enamacala aphikisiwe.
Amajikijolo amnyama amnyama avimba ukukhula kwamagciwane asezingeni eliphakeme kakhulu futhi anempilo yesimo se-pathogenic, kufaka phakathi. gastric inducer Helicobacter pylori. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi i-acidic polysaccharides yembewu emnyama (galactans) ingavimbela ukunamathela kwamagciwane ku-mucosa wesibeletho. Kepha nge-pancreatitis, i-blackcurrant ingasetshenziswa kuphela ngohlobo lwe-compote futhi kuphela ngaphandle kokubhebhetheka.
Ngenxa yesikhumba esiminyene, okuqukethwe okuphezulu kwemicu yezitshalo noshukela omusha, ama-cherries amnandi nge-pancreatitis, kanye namagilebhisi, awanconywa.
Ngomhudo, i-Blueberry kissel ingasiza iziguli ezinokuvuvukala kwepancreatic, ngoba ama-blueberries amasha nawo awasetshenziselwa i-pancreatitis.
Futhi i-sea buckthorn ku-pancreatitis (ekuxolelweni kwifomu lesifo esingelapheki) kuvunyelwe futhi ngesimo sesengezo senani elincane ezitsheni zejelly noma i-stewed - uma kungenazinkinga ngomsebenzi wamathumbu, okwenza kube kuvame kakhulu ukuvakasha endlini yangasese.
Ukusetshenziswa kwesigaxa se-sitrobheli kwesifo se-pancreas
Ngingakwazi ukudla ama-sitrobheli nge-pancreatitis? Izithelo zaseVictoria zinothile ku-Vitamin C nezakhi zomkhondo. Akekho noyedwa kwabathandekayo owathandabuza usizo lwayo kubantu.
Ngezindlela ezibucayi zezifo zesisu nokuqhakaza kwamahlalakhona, ukusetshenziswa kungaba yingozi. Ukunikezwa komphumela onjalo kuhlotshaniswa nezinto eziningi.
Lezi zinto ezinomphumela omubi kumuntu yilezi ezilandelayo:
Ukuba khona kwenani elikhulu le-vithamini C, elisiza ukubuyisa ukungasebenzi komzimba futhi kwehlise ukuguga, kuholela ku-activation yokukhiqizwa kwe-hydrochloric acid yizindlala zesisu, i-gastritis iyanda, kanye nokukhiqizwa kwemfihlo yokugaya kwamanyikwe. Umphumela onjalo kuma-pancreas uholela ekusebenzeni kokuzigaya ngokwawo ngama-enzyme e-pancreatic amangqamuzana izicubu zesitho esikhanyisiwe.
Ukuba khona kwemicu yama coarse eVictoria kusiza ukuthuthukisa ukugaya. Kepha ngesikhathi sokuqina kwe-pathology, afaka umthwalo omkhulu ohlelweni lokugaya ukudla. Ukugaya ngesikhathi sokuvuvukala okuningana kuholela eqinisweni lokuthi ukuvutshelwa kuqala esiswini namathumbu, okuvusa ukubukeka kokuqhuma nobuhlungu esiswini namathumbu.
Ukuba khona kumaseli enani elikhulu lama-acid acid, angama-antioxidants amahle kakhulu nezihlanganisi zamakhemikhali ezisebenzayo. Endabeni yokuvuvukala, ukuthathwa kwalezi zingxube kubangela ukulimala ngenxa yokungezwa kwezinqubo zesilonda se-peptic ezenzeka kulwelwesi lwe-mucous lwesisu ne-duodenum ukukhipha amandla.
Izithelo ezintsha azenqatshelwe ukuba zidliwe, kepha zisetshenzwa ngokwelashwa - azenzeki kuphela, kodwa futhi ziyadingeka. Ukusuka kumajikijolo alungisa i-jelly, i-compote ne-jelly. Uma kungenzeka, kunconywa ukuthi kungeniswe i-sitrobheli compote nejelly ekudleni. Izindlela zokupheka zokwenza izitsha ezinjalo zilula kakhulu futhi zingabizi kunoma ngubani. Ukusetshenziswa kwalezi zitsha kuvumela umzimba obuthakathaka ukuthi uphinde ukhiphe inani elidingekayo lamavithamini nezinto ezisebenzayo eziphilayo.
Ngesikhathi sokwelashwa okushisa, inani elikhulu lezinhlanganisela eziwusizo libhujiswa, kepha inani elisele lamakhompiyutha lanele ukuqeda ukuntuleka kwamavithamini.
Yidla ama-sitrobheni amasha kunconywa njengenyathelo lokuthibela lezifo eziningi nokwenza umzimba ube ngokwejwayelekile.
Bonke abondli abafuni ukukhathala ngezakhiwo ezizuzayo zama-sitrobheli.
Amajikijolo asetshenziswa zombili ngezinhloso zokugcoba nokwelapha umzimba.
Ucebile ngo-vithamini C. Uqukethe i-iron, i-folic acid, i-magnesium, i-calcium, i-fiber. Ngenxa yalokhu, ama-sitrobheli akuyona nje amajikijolo amnandi, kepha isitoreji sezinto ezinomthelela ekuphilisweni komzimba.
Kodwa-ke, amajikijolo okwelapha akufanele afakwe njalo ekudleni. Ama-strawberry awanconywa izilonda, i-gastritis, i-cirrhosis, izifo zamanyikwe. I-pancreatitis futhi isikhathi sokukhawulela ngokwakho ekudleni izithelo ezimnandi.
Lokhu kuchazwa ngokuqukethwe kwe-asidi ephezulu kuma-sitrobheli, okucasulayo ukugcinwa kotshwala. Esimweni esibi se-pancreatitis, inani eleqile lalezi zingwebu lingadonsa indlela yokusebenza kwe-autoaggression, lapho izingxenye ezisetshenziswa ngumzimba ukugaya ukudla ziqala ukubhubhisa isitho eselimele ngokwaso, okungukuthi, ama-pancreas aqala “ukuzidla” uqobo.
Ukuba khona kwezicucu zama-coarse kumajikijolo kubhekwa ngabasebenza ngokudla okunempilo njengekhono, kepha kuphela esiswini esinempilo, ngoba basiza ukuthuthukisa inqubo yokugaya.
Kodwa-ke, esigulini esine-pancreas, ukusabela ngobudlova nomthwalo osindayo akwamukeleki, ngoba ngenxa yalokhu, ukuvutshelwa kuqala emathunjini, okucasulayo ukuqhuma.
Ama-Strawberry e-pancreatitis anconywa ukuthi asetshenziswe ngemuva kokwelashwa okushisa. Ngakho-ke, izosekela umzimba obuthakathaka yilesi sifo futhi ngeke ibe yandisa inqubo ye-pathological. Izazi zezempilo zeluleka ukwenza amajikijolo ujeli, i-mousse, i-marmalade ne-jam. Amajikijolo aphelele asetshenziselwa ukupheka ama-compotes.
Lolu hlobo lwe-pancreatitis lungakhulisa kakhulu ukudla kweziguli. Kepha ama-sitrobheni amasha avunyelwe ukuthi adliwe kuphela lapho kukhona amandla amahle ekwelashweni. Ekuqaleni, akuvunyelwe ngaphezu kwama-1-2 amajikijolo ngosuku. Uma kungekho buhlungu esiswini, ukushisa kwenhliziyo noma isicanucanu, akukho ukukhululwa kwesitulo, khona-ke ama-sitrobheli angafakwa kwiziladi zezithelo nakumajikijolo. Ngaso leso sikhathi, inani laso lansuku zonke akufanele lidlule izingcezu eziyi-10.
I-Melon ene-pancreatitis: kungenzeka ukuthi udle lesi sithelo esigabeni esibi sesifo.
Esimweni esibi se-pancreatitis, iziguli zinikezwa ukudla okuvumela ukunciphisa umthwalo kumanyikwe. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwama-sitrobheni amasha akuvunyelwe ngokuphelele. Kodwa-ke, ngemuva kwesigaba "sokulamba" sokwelashwa okuhlala njalo ezinsukwini ezingama-2-3, kuvunyelwe ukwethula i-jelly eyi-liquid ne-sitrobheni ecubuziwe ekudleni kweziguli. Ezinsukwini ezimbalwa kamuva, ngemiphumela emihle yokwelashwa, imenyu yesiguli inwetshwa ngama-compotes, infusions, jelly kusuka kuleli bheri.
Imiphi imifino engadliwa nge-pancreatitis? Yini futhi yimiphi imifino engamukeleki ngokwezigaba ngokwezinga labodokotela?
Cishe wonke amajikijolo aqukethe ama-asidi: i-citric, i-salicylic, i-malic, i-ascorbic, i-benzoic, i-presinic, njll. I-Acid icasulula ukugcinwa koketshezi:
Kwi-pancreatitis ebukhali, ukweqiwa kwalawa makhulu kungaqinisa isimo - kuvule umshini wokuhlukumeza okuzenzakalelayo, lapho izinto ezihlose ukugaya ukudla zibhubhisa inyama yamanyikwe. Ngesikhathi sokuxolelwa, ukwakheka kwejusi ngokweqile kusongela ukukhuphula i-pancreatitis engapheli.
Ngaphezu kwalokho, amajikijolo aqukethe imbewu futhi acebile ngefayibha, isakhi sokudla esidambekayo. Ukuze uthole amathumbu aphilile, lokhu kuyazuzisa, ngoba le-ballast isheshisa ukuphuma kwamafutha, ihlanza amathumbu, ngaleyo ndlela ikhulise umthamo wayo wokufaka. Nge-pancreatitis, ukusabela ngobudlova akwamukeleki.
Amanye amajikijolo atholakala ngokweqile futhi aziinkanyezi.Ezigulini ezine-pancreatitis, lokhu kusongela okuqondile kokuqunjelwa.
Ngalezi zizathu, izithelo ezinesikhumba esilukhuni, i-acidity ephezulu nokuqukethwe okuphezulu kwama-tannins akunconywa:
ama-currants (okubomvu nokumnyama),
Ijusi kulezi zithelo nayo ayikhonjiswa ukusetshenziswa. Kodwa izakhiwo eziwusizo zingasetshenziswa kuma-broths netiye: amajikijolo ayenziwa kabusha ngamanzi abilayo, afakwa ngaphambi kokupholisa, ahlungiwe. Umhluzi usetshenziswa kuma-compotes, i-jelly, i-jelly, ama-puddings - njengengxenye yenhlanganisela nejusi lamanye amajikijolo.
Kukhona amajikijolo athile angadliwa kuze kufike emkhawulweni. Okuthandwa kakhulu ngama-sitrobheli, ama-raspberries kanye nama-blueberries.
Iwusizo kumbono kanye nama-blueberries amnandi nje, njengamanye amajikijolo, ancishisiwe esigabeni esibi sesifo se-pancreatic.
Ngokuncipha kokuvuvukala osekuqalile, ngesikhathi sokuguqukela esikhathini se-subacute, kusetshenziswa ama-decoctions, compotes kanye ne-jelly. Njengoba ukuthethelelwa kukhula, inani lezitsha ze-blueberry landa: i-jelly, mousse, marmalade, amasoseji. Ama-xylitol kanye ne-sorbitol sweeteners akhethwa njengama-sweetelers we-blueberry.
Ama-blueberries asetshenziswe ngokuhlukumezeka nawo awakufanele - ngale ndlela, leli beri linomphumela obuthakathaka, kepha oyisithuthi.
Ngokuxolelwa okuzinzile, kuvumelekile ukudla amajikijolo ambalwa ngosuku. Kepha njengoba kungenakwenzeka ukubakhulula ku-peel, asikho isidingo sokujaha ukwandisa ingxenye yama-blueberries.
Kubalulekile! Awekho amajikijolo amasha angadliwa esiswini esingenalutho.
Ungakhohlwa ama-rosehip: awawudli ngesimo sawo semvelo, kepha i-decoction iyasiza ngokuvuvukala kwamanyikwe. Kungadakwa kuze kufike ku-1 litre ngosuku.
Lapho ukhetha ukwelashwa kwamavithamini ngendlela yamajikijolo asetshenzisiwe noma wemvelo, kufanele ulalele umzimba wakho: kwenzeka ukuthi ukudla okungavunyelwe kulula ukuthwala, kuyilapho okwamukelekayo, ama-blueberries afanayo, ama-raspberry kanye nama-sitrobheli, kubangela ukusabela ngobudlova. Ngakho-ke, ngaphandle kokukhulisa, ungazama imithamo emincane kakhulu okufunayo, nangokusabela kohlelo lokugaya ukudla ukuthola ukuthi ngabe kufakwa i-berry ethile kwimenyu yezikhathi ezithile zonyaka.
Ngakho-ke, amajikijolo angaba umphakeli wezakhamzimba emzimbeni ophethwe yi-pancreatitis. Izinyathelo zokuqapha kufanele zilandelwe kuphela.
Ukwakheka nokuqukethwe kwekhalori
I-Strawberry ingamakhalori aphansi - ngamagremu ayikhulu amajikijolo angama-36,9 kcal kuphela. Cishe ama-90% ayo aqukethe amanzi. Amagremu ayikhulu amajikijolo abiza ama-gramu angu-0.8 wamaprotheni, ama-0.4 amagremu wamafutha, amagremu ama-7.5 ama-carbohydrate, amagremu ayi-1,3 we-organic acid, amagremu ama-2.2 wefreyimu.
Ama-Strawberry acebile kakhulu:
amavithamini A, B, C, E, N,
i-calcium, i-potassium, i-sodium, i-phosphorus, isibabule, i-iron, i-manganese, i-phosphorus, i-fluorine, ithusi, i-boron, i-cobalt,
Le setha yezithako inika ama-sitrobheli inani elikhulu ekugcineni impilo.
Izici eziwusizo zamajikijolo
Phakathi kwamajikijolo amaningi, ama-sitrobheli abhekwa njengomholi kwizakhiwo ze-antioxidant. Kusheshisa ukuqedwa kobuthi, ubuthi, ama-radicals mahhala emzimbeni, kuvikela amaseli emiphumeleni eyonakalisayo yamuva, kuvimbela ukukhula komdlavuza.
Ngenxa yama-flavonoids kanye no-Vitamin C, ama-sitrobheli anamandla okulwa nokuvuvukala, amandla okubulala amagciwane, futhi aqinisa amasosha omzimba. Ngakho-ke, kuvame ukunconywa ukuthi kudliwe ukuze kuvinjelwe futhi kwelashwe amakhaza.
Amajikijolo abe nomphumela we-diuretic oshiwo, osiza nge-rheumatism, izifo zofuzo, ukulimala kwesibindi.
Umkhiqizo ucebile nge-iodine, ukusetshenziswa kwayo kunomthelela ekujuleni kokusebenza kokusebenza kwe-yegilo gland kanye ne-endocrine system. I-salicylic acid etholakala kumajikijolo isiza ukuthuthukisa impilo ehlangene.
Ngaphezu kwalokho, sitrobheli:
Kuthuthukisa ukwakheka kwegazi, kuvimbela ukuthuthukiswa kwe-anemia.
Ijwayelekile ukushaya kwenhliziyo.
Kuthuthukisa ukuqina, ithoni yemithambo.
Ithuthukisa ukuhanjiswa kabusha kokuhlanzeka.
Kuthuthukisa ukuhamba kwe-nerve impulses.
Kuthuthukisa ukunikezela kwe-oksijini ebuchosheni, ngaleyo ndlela kusebenze ukusebenza kwengqondo.
Ibheka ukuthuthukiswa kwemivimbo.
Kuthuthukisa imizwa, kusiza ukuqeda ukucindezelwa, ukudangala, ukucasuka.
Kuthuthukisa ukugaya nomzimba.
Ijwayelekile ukusebenza kwe-microflora namathumbu.
Iqinisa izicubu zamathambo.
Kuthuthukisa ukubukeka kwesikhumba, izinzipho, izinwele.
Amajikijolo ayacetshiswa nge-magnesium ne-potassium, ngenxa yokuthi asiza ukwenze umfutho wegazi ngesikhathi se-hypertension, abe namakhono okuzola, athuthukise ukulala, nokusebenza kwenhliziyo.
Ngakho-ke, ama-sitrobheli angudokotela wemvelo, omnandi futhi, okubaluleke kakhulu, udokotela ongabizi ongasiza ekuvinjelweni nasekwelapheni izifo eziningi.
Yini ezolimaza ama-sitrobheli?
I-Strawberry ingenye ye-allergener eqinile. Ukusabela komzimba ngokuvamile kubonakala ngesimo se:
kukhona nezimo zokuqhaqhazeka kwe-anaphylactic.
Amajikijolo ayacetshiswa ngama-organic acids, akhulisa umsebenzi wama-enzyme wokugaya futhi asebenzise ukucasulwa kwe-bile. Ngaphezu kwalokho, zigcwele ngocingo. Ngenxa yalezi zizathu, umkhiqizo akufanele udliwe ngesikhathi sokwanda kwezifo zomgudu wokugaya ukudla. Ukwephulwa kokuvinjwa okunjalo kuzovusa ukukhula kwezimpawu ze-dyspeptic:
Akunconywa ukuthi udle ama-sitrobheli amaningi ngesikhathi:
Okokuqala, kungaholela ekuphazamisweni komgudu wokugaya ukudla, ikakhulukazi amathumbu.
Okwesibili, ukuhlanganiswa kwe-oxalic acid ne-calcium formula calcium oxalate. Emzimbeni, ayincibiliki futhi ingadala ukukhula kwe-osteoporosis, ukukhuphula i-cystitis, i-pyelonephritis, i-urolithiasis.
Imigwaqo yokudla amajikijolo yile:
Ukwanda kokuqunjelwa ujusi wesisu, i-appendicitis, i-colic ejwayelekile noma yesisu, ukukhuphula kwezifo zepheshana lesisu.
I-fiber coarse izothukuthelisa ulwelwesi lwe-mucous olucashile lomgudu wokugaya ukudla, okuholela ekujuleni kokuwohloka kwesisu kanye nokwephulwa kwemali esele ye-electrolyte. Ukucebisa ngama-asidi kubeka umngcele amandla wokujabulela ama-sitrobheli we-gastritis, izilonda, i-gastroduodenitis.
Strawberry inomphumela we-diuretic. Ngakho-ke, phambi kwamatshe ezinso, urea, ukusetshenziswa komkhiqizo onjalo kunqatshelwe. Ngaphandle kwalokho, ukusetshenziswa komkhiqizo onjalo kungaholela ekuhambeni kwamatshe, okubangela ubuhlungu obukhulu.
Amajikijolo akufanele adliwe ngabantu ababangelwa ngumkhiqizo onjalo, izingane ezincane, omama abahlengikazi ngesikhathi se-hepatitis B.
Odokotela abancomi ukudla umkhiqizo ngesisu esingenalutho. Lokhu kungaholela ekukhathazekeni kwamathumbu, uhudo, kanye ne-colic esiswini.
Ukwethulwa kwama-sitrobheli ekudleni kwama-pancreas akhanyisiwe
Nge-pancreatitis, ukuphuma kwama-enzymes wokugaya kusuka kumanyikwe kuya emathunjini kuyaphazamiseka. Ngakho-ke, ingxenye enkulu, ahlala esidlekeni, asebenze lapho futhi abhubhise izicubu zesitho.
Ukudla, ikakhulukazi okugcwele ngama-asidi, kuvuselela ukusebenza kwama-enzyme. Ngenxa yalesi sizathu, ngokuvuvukala kwamanyikwe, kudliwa okuqinile esigulini, futhi indlala ngokuvamile iboniswa ezinsukwini zokuqala. Lokhu kuyadingeka ukwehlisa umthwalo kusuka ku-gland nokumisa inqubo yokuvuvukala.
Ama-Strawberry, ngisho namnandi, acebile ngama-organic acid, ngakho-ke nge-pancreatitis, ukusetshenziswa kwawo kufanele kusondele ngokuqapha.
Kungenzeka yini ukuthi udle ama-sitrobheli nge-pancreatitis, kuya ngesimo salesi sifo, ubukhulu benkambo yaso, amandla okuthola kabusha isimo, izici zomuntu ogulayo.
Ama-sitrobheli amasha ku-pancreatitis oyingozi anqatshelwe. Kunezizathu ezintathu eziyinhloko zalokhu:
I-Organic Acid Chuma Izinto zenza umsebenzi wokukhiqiza nokusebenza kwama-enzymes wokugaya ukudla, okuholela ekulimaleni kwezicubu ze-pancreatic.
I-Fiber Saturdayation Ngokuvuvukala kwesikhumba, kuzolimaza ulwelwesi lwama-mucous lwezitho zokugaya, ikakhulukazi amathumbu, okuzoholela ekubumbeni, ukuqhakaza, i-colic, ukwakheka kwegesi ngokweqile, nokuphazamiseka kwesitulo.
Khulisa ukungezwani komkhiqizo Nge-pancreatitis, ukungavikeleki kwesiguli kuya buthaka, okunyusa ubungozi bokuthola izimpawu zomzimba, ezizothuthukisa isimo somuntu.
Ngosuku lwesihlanu noma lwesithupha ngemuva kokukhululeka kwezimpawu ezibucayi zalesi sifo ezinamandla okuthola ukululama, ukungabikhona kwezinhlungu ezinzima zepancreatic, isiguli sivumelekile ukuba sidle ujeli, siphuze izithelo ezidliwayo, imvuthuluka evela ku-sitrobheni esivele singekho omuncu.
Ngefomu emfushane ye-pancreatitis kanye nezindlela ezinhle zokululama, kwesinye isikhathi odokotela bangavumela isiguli ukuthi sizame ama-strawberry ambalwa (acishe abe yishumi) efomini eli-shabby ngosuku lweshumi ngemuva kokumisa inqubo yokuvuvukala okubi kakhulu. Kodwa-ke, lokhu kungenzeka kuphela ngokululama okusheshayo kanye nokungabikho kwezimpawu ze-pancreatic.
Ngesikhathi sokuxolelwa okuqhubekayo
Ama-Strawberry ngokuvuvukala kwama-pancreas esigabeni sokuxolelwa, kanye ne-pancreatitis engapheli ngaphandle kwesigaba sokuqhuma, avumelekile womabili amafomu aphathwa ngokushisa nangendlela entsha. Kulokhu, kufanele ubheke ngokuqinile umthamo womkhiqizo - umuntu omdala akanconywa ukuthi adle ngaphezu kwama-300 amagremu amajikijolo amasha ngosuku.
Ukusuka kuma-sitrobheli ungapheka futhi:
Izaladi zezithelo nezithelo zombhalo ezivela ku-sitrobheli ezinongiwe nge-yogurt enamafutha aphansi zinambitheka kakhulu futhi zilula.
Esigabeni sokuxolelwa, ama-sitrobheli azosiza ekuqaliseni umsebenzi we-pancreas, i-microflora kanye nokusebenza kwamathumbu, futhi uzoba nesandla ekuvuseleleni ukukhukhumala kwama-pancreas. Ukusetshenziswa kwalezi amajikijolo kuzophinda kugcwalise futhi izinqolobane zomzimba kuma-vithamini nasezakhiweni zamaminerali, okuchitheka kahle ngesikhathi sokugadla kwendlala, ukudla okuqinile kwe-pancreatitis eyingozi.
Ungawadla kanjani ama-sitrobheli
Ukuze ungalimazi umzimba, futhi ungakuvuseleli amandla okuhlaselwa yi-pancreatic, kufanele unamathele kule mithetho elandelayo:
Yidla kuphela, amajikijolo athambile hhayi izinhlobo ezimuncu.
Hlafuna umkhiqizo ngokuphelele.
Ungadli amajikijolo abolile, abolile, angavuthiwe.
Ungadli amajikijolo esiswini esingenalutho.
Ungasebenzisi kanye ne-calcium supplements.
Musa ukufaka ukhilimu osindayo.
Sebenzisa amajikijolo amasha, ahlanganisiwe kungakapheli amahora angama-24.
Ukuze ungabisi ubuthi, kubalulekile ukukhetha ibheri enhle. Kungcono ukudla ama-sitrobheli eyenziwe ekhaya, ngoba amajikijolo akhuliswe ngezimboni avame ukucutshungulwa ngamakhemikhali. Uma izithelo zingavumeli ujusi ehoreni elilodwa noma amabili ngemuva kokugeza, lokhu kusho ukuthi amajikijolo acutshungulwa ngamakhemikhali noma ngokushintshwa ngofuzo, akufanele adliwe.
Izithelo kufanele zibe bomvu okhanyayo, nokunwebeka futhi zibushelelezi, ngaphandle kwamabala amabala amnyama ansundu kanye neminonjana yomonakalo ngenxa yezilokazane. Imisila yamajikijolo kufanele ibe luhlaza.
Iphunga lezithelo ezisezingeni lihle kakhulu. Uma ama-sitrobheli ehogela i-acid, ukubola kungumkhiqizo onakele.
Kuvunyelwe kuphela amajikijolo esikhathi sonyaka. Imvamisa, izihlahla athela izithelo kusuka ngasekupheleni kukaMeyi kuya ekuqaleni kukaJulayi, kukhona futhi izinhlobo remontant ezingathela izithelo ngoSepthemba. Kwezinye izinkathi, amajikijolo akufanele athengwe. Akukho lutho oluzuzayo kubo, futhi ubungozi bokuthi ubuthi bungaphezulu kakhulu.
Ukusetshenziswa kwemali yezindela yokwelapha i-pancreatitis
Uzomangala ukuthi lesi sifo siqeda ngokushesha kangakanani. Nakekela ama-pancreas! Abantu abangaphezu kwe-10,000 babone ukuthuthuka okukhulu empilweni yabo ngokuphuza nje ekuseni ...
Izinzuzo nokulimala kwe-sesame ku-pancreatitis
Lo mkhiqizo uphakeme kakhulu amakhalori, ucebile ku-fiber namafutha acid, ngakho-ke ngezifo zohlelo lokugaya ukudla kufaneletshenziswa ngokuqapha.
Izakhiwo ezilusizo zenyama elula ye-turkey ye-pancreatitis nezinketho zokulungiselela kwayo
Kwi-pancreatitis, inyama ye-turkey ibaluleke kakhulu ngoba ine-kilojoule ephansi futhi ngesikhathi esifanayo inothile wamavithamini, izinto ezisebenzayo, namaprotheni angagaya kalula.
Kuyini ubungozi bamantongomane nge-pancreatitis nokuthi ungayikhetha kanjani i- nati enempilo?
I-Walnut igcwele amafutha kanye namafutha acid. Ukusetshenziswa kwayo njalo, ukusetshenziswa ngokweqile kuholela ekukhuluphiseni kanye nasekuthuthukisweni kwezinkinga zokugaya ezihambisana.
Kungenzeka yini ukufaka i-salmon ku-pancreatitis ekudleni nokuthi izinhlanzi ezibomvu zisebenza kanjani
Ukusetshenziswa ngokulingana kwe-salmon ku-pancreatitis engapheli, ezimweni zokubekezelelwa okuhle komzimba, kusiza ukuthuthukisa umsebenzi ngokomzimba nangokwengqondo
Eminyakeni emithathu eyedlule ngangihlaselwa i-pancreatitis e-acute. ngosuku lwesithupha, sengivele ngidla i-jelly kusuka kuma-fabby ama-shabby. azange kube nemiphumela emibi.
Ngiwathanda kakhulu ama-sitrobheli. Ngine-pancreatitis engamahlalakhona. Ngefomu elisha ngidla kuphela amajikijolo wezinkathi ezithile engadini yami, ngesamba esingadluli kumagremu angama-200 ngosuku. Ngipheka isitshulu sezithelo, i-jelly, izithelo nama-berry salads kuwo.
Zuza futhi ulimaze
Inani elingathandabuzekiyo lama-sitrobheli avuthiwe (ama-sitrobheni wasengadini) okuqukethwe okuqukethwe kwawo kwenani elikhulu:
Strawberry ineqoqo lezakhiwo eziwusizo:
I-calcium iqinisa uhlelo lwamathambo
Iodine iyadingeka yi-yegland yegland,
i-magnesium yondla ubuchopho nenhliziyo,
Vitamin C ivimbela ukukhula kwamakhaza nezifo ezithathelwanayo,
i-fiber coarse ne-fiber kwenziwa ngcono ukugaya,
iguqula umsebenzi wezinso nesibindi, njll.
Ukuze enze ngcono isimo sakhe, isiguli esine-pancreatitis sidinga ukubuyisa umzimba wakhe ngezakhi eziwusizo. Kepha akufanele sikhohlwe ukuthi lobu bumnandi buxabana kakhulu. Esigulini esine-pancreatitis, i-allergy ingavusa lesi sifo.
Ngokuqhuma kwe-pancreatitis engapheli, ama-sitrobheni amasha abhekwa njengomkhiqizo onqatshelwe.
Inani elikhulu lemicu yama-coarse equkethe kulezi amajikijolo lidala umthwalo omkhulu epheshaneni lesisu lesiguli, livuse izinqubo zokuvuvukala esiswini futhi likhulise ukubonakaliswa kwalesi sifo.
I-Vitamin C equkethe amajikijolo yenza kusebenze ukukhiqizwa kwejusi ye-pancreatic, okunomthelela ekuzigayiseni kwesitho.
Ama-asidi wezithelo atholakala kuma-sitrobheli angadala izinqubo zokulimala ku-mucosa wamathumbu kanye nesisu, okulimaza inkambo yesifo.
Ukondliwa okufanele kwe-cholecystitis kufanele kuhambisane nokudla kwe-pancreatitis, esesigabeni sokuxolelwa okuqhubekayo. Inani elincane lejusi le-sitrobheli kusuka amajikijolo avuthiwe lamukelekile. Ebusika, ukusetshenziswa kwe-infusions kusuka kuma-sitrobheli omisiwe, amaqabunga awo, izimbali kuzosiza ukuthola amavithamini.